Unobangela-Ukubala iiNgcinga ngeSini
I-CAUSE (Umdibaniso wokuChasana neMfundo engakhuselekanga yezeSondo)
Abazali Baxoxa Ngezifundo Ezikhuselekileyo Ngezini Zesini
Ukuguquka kweTransgender IiVidiyo ngabaDlulisi
Unjingalwazi uJohn Whitehall we-12 yeVidiyo esetiweyo kwiDysphoria yoBuntwana
UWalt Heyer-Ukuzisola kweTransgender
IINKQUBO ZEZIKOLO EZIKHUSELEKILEYO
ZONKE IZIKOLO ZOKHUSELEKILEYO LWEZIKOLO
Bazali - Amalungelo ethu.
Inkqubo yeZikolo eziKhuselekileyo iphunyezwe kwizikolo zaseOstreliya zifundisa iingcinga zesini ze-LGBT ebantwaneni ngeli xesha ubuni babo besini bukhula kwaye xa besesichengeni sokudideka ngokwesini. I-Australia emva koko ibone ukuqhuma kwenani labantwana elisiwe kwiiklinikhi zesini. Iwebsite ye-CAUSE inamanqaku amaninzi obuchwephesha kwi-transgenderism, iGender Dysphoria, iTransversion Therapy, ukutshintsha isondo kunye neZikolo eziKhuselekileyo, ziingcali ezinjengoNjingalwazi uJohn Whitehall, uNjingalwazi uDianna Kenny nabanye abaninzi.
Imibono yesini ezikolweni.
Amaphepha anobungcali kwiTransgenderism.
Oogqirha babachaza ubunyani beTransgenderism.
UProf John Whitehall ubhala kwi-Quadrant Magazine kwi-Dysphoria yesini.
IHormone blocker kunye nazo zonke izinto zeTransgender.
Ingcebiso noNyango olusebenzayo.
Isibini esisele sithandana nabanye, umntu obethandana gay kunye nomntu othetha naye malunga nokuyeka ubomi babo bangaphambili be-LGBT. Abanye abayi-13 babelana ngamabali abo ebhaliweyo malunga nendlela abaniki ngayo iingcebiso
IWalt Heyer yoTshintsho lweSondo kwiWebhusayithi.
UWalt Heyer wayehlala njengomfazi uLaura iminyaka eli-10 ngaphambi kokuchonga nokwamkela ukuba umntu akakwazi ukutshintsha isini sabo.
Kufuneka Ukufumana Abacebisi.
Izikolo ezikhuselekileyo Iingcamango zesini.
Abafundi kwiKlasi yokuDlala ngokuDlala kwi-LGBT
Inkqubo yeZikolo eziKhuselekileyo yeengcinga zesini yagunyaziswa liqela labantu elizimeleyo lalihloniphekile kuba ekuqaleni lalilungiselelwe ukujongana nengxaki yokuxhatshazwa.
Into eyiyo endaweni yayo yatyhala imida ngaphaya komda ebixhaswe kuwo. Simi kunye kwaye siyayixhasa i-Coalition Federal Government ekususeni inkxaso-mali kunye nenkxaso yale nkqubo ngendlela yayo yangoku.
I-ajenda eqhutywa yimanyano yeZikolo eziKhuselekileyo ijolise kulutsha nakubantwana abakwiminyaka esengozini kakhulu kwaye ijolise ekubahlukaniseni kwisiseko sosapho lwabo lwesiqhelo nakwimilinganiselo yoluntu ekuxhaseni bonke abemi. Siyacela ukuba ususe ingqalelo kule nkqubo kwaye uye kwinkqubo engcono ejolise ekulweni ukubandakanywa kunye nokwamkelwa AKUSEKELWE kwaye ucalucalulo ngokwesini kunye nokwabelana ngesondo.
Isini sobuntwana iDysphoria. Uthotho lweevidiyo ezili-12 ezinokukhutshelwa.
Ukudideka kwesondo. Unyango lweHormone. Utyando lweSondo loNyango. UkuCetyiswa kwengqondo. Ukucaciswa kweTransgenderism.
UNJingalwazi JOHN WHITEHALL.
Bukela iividiyo ngesiNgesi okanye usebenzise umguquli kaGoogle kweli phepha ukuze ufunde imibhalo yolwimi lwakho.
Nayiphi na umzali uyazi ukuba xa bekhulisa abantwana, kukho indawo ezininzi ezinokuba nzima ukujamelana nazo, kwaye umntwana ngamnye ufuna iprogram yakhe yokukhathalela. Kodwa sonke siyazi ukuba umlilo unobungozi, ngoko siyalumkisa abantwana beengozi ngendlela abangayiqonda ngayo. Asibavumeli ukuba bafunde ukuba umlilo unobungozi ngokubavumela ukuba badlale nayo. Iimpawu kunye nentlungu ziya kuvezwa emva kokuba umonakalo owenziwe ukuba ngaba kunjalo. Ngendlela efanayo, kutheni sifanele sicelwe ukuba sivumele abantwana bethu ukuba bathathe inxaxheba kwiinkqubo ezizibuza ukuba abantwana baxhomeke ukuthembela kwabo kwiyunithi yentsapho yabo ukuze banike isikhokelo esifanelekileyo ukuze basebenze ngendlela yabo ngokubaluleka, ukukhula komzimba kunye nophuhliso kunye ngokuxhomekeke kwimfundo "ngaphaya kommandla wokuchaswa nokuxhatshazwa kweentlobo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo yilokho iNkqubo yeZikolo ezikhuselekileyo icela ukuba sikwenze.
Ilungu lePalamente yase-Australia uMnu Andrew Haste.
Ilungu lePalamente u-Andrew Hastie uthetha kwinkqubo "yeZikolo eziKhuselekileyo" kwiPalamente yase-Australia.
Qonda i-ajenda kunye nenqanaba lendawo yokudlala- fumana ukuba kutheni le nkqubo ifundiswa kuphela emva kweminyango evaliweyo kwaye ngaphandle kokhetho lomzali. Ukuba ukhuseleko lwabantwana bethu lubaluleke kakhulu, kufuneka luvulekele ukuba lujongwe kwaye lubandakanyeke kubo bonke abo bachaphazelekayo ekukhuliseni abantu abancinci ukuba baqonde ukuba singabantu abahlukeneyo, abalinganayo ngazo zonke iindlela. Cela ikopi yekharityhulam, kwaye ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungafumana isikolo esivumayo ukuveza umxholo waso, kukulungele ukuqonda umnxeba wentshukumo esiyibeke phambi kwakho.
Umklami we-Roz Ward weZikolo eziKhuselekileyo uyavuma ukuba izikolo eziKhuselekileyo azikho ukuxhatshazwa.
Umakhi we-Roz Ward weNkqubo yeZikolo eziKhuselekileyo uyavuma ukuba iZikolo eziKhuselekileyo aziyonto yokuxhaphaza.
Kulabo abangakakulungeli ukunikezela ngamalungelo akho njengomzali wokufundisa nokukhokela abantwana bakho ngokwexesha elivakalayo elivakalayo nelinokudideka lokukhulelwa nokukhula, nceda usebenze! Ngoku lixesha lokujoyina inkxaso yokususwa kwale nkqubo yokulinga kunye nokwahlula.
Umama uthetha ngokufumanisa iingcinga zesini ezifundiswa ngunyana wakhe esikolweni.
Ibali likaCella malunga nabantwana bakhe kunye neNkqubo “yeZikolo eziKhuselekileyo” esikolweni sabo.
Nantsi indlela onokubuyisela ngayo kwakhona uluntu lwethu ukuba uhlakulele ngokukodwa ingqiqo enamandla yokufaka kunye nokwamkela:
Khuthala esikolweni sakho. Fumanisa ukuba ngawaphi amanyathelo ekuhlaleni abenayo ukubhiyozela abantu abahlukileyo abenza uluntu-bajoyine kwaye babhiyozele iminyhadala yezikolo ezibekwa ukuxhasa onke amalungu oluntu lwesikolo-hayi abo banomdla kwi-ajenda yabo isazisi njengesiseko sobukho.
Fumanisa ukuba sifundiswa ntoni isikolo sakho kunye neenkqubo abazisebenzisayo ukufundisa abantwana nolutsha malunga nokwamkelwa KWEZO ZONKE iintlobo zayo - malunga nokulingana, uvelwano, kunye nokuqonda ukwahlukahlukana kuzo zonke iindlela. Xhasa isikolo sakho ngokwaziswa nokuqonda ukuba UKHUSELEKILEYO ayilingani nabo bavezwa ngokwesondo.
Buyisa umva ngegama UKHUSELEKILE-qinisekisa ukuba ayisosipho esiphakamileyo sokuzilungisa kwabantwana ngaphaya kokuqonda kwabo kunye notyekelo lwendalo lokufuna ukwazi. Abantwana bavuthwa ngokwamazinga ahlukeneyo kwaye le nkqubo ayikuvumeli oku. Iyanyanzela umbono kunye nokwenza izigqibo kwiindawo ezibuthathaka ngaphambi kokuba abantwana abaninzi bakulungele ukubuqonda ubukhulu kunye nobude bexesha lokukhetha okwenziwayo. Ukukhula kunye nokuvuthwa ngokwesondo AKUKHO kunyanzelwa kwaye indlela yokususa ukubandakanyeka kwabazali kule nkqubo ivumayo, ayililo inyathelo lezempilo ekufuneka sihlale phantsi silwamkele. YITHI HAYI! kwaye uqinisekise ukuba isikolo sakho siyasazi isigqibo sakho.
Ukuba abantwana bakho bengasesikolweni, fundela ngezikolo kwindawo yakho ngokuzivakashela kwaye ucele ukuhamba ngexesha lokuphumla okanye ixesha lokukhulula. Bona indlela abantwana badibanisana ngayo kwaye babone abantwana abasamkelekileyo abakwamukelayo.
Bhala kwendawo yakho MP okanye iNkulumbuso kwaye ubavumele ukuba bazise uxhaswe nguRhulumente weSizwe ukuba ususe le nkqubo ngokubhekiselele kwinkqubo ecacileyo kunye esebenzayo. UKUSEBENZISA ukuthetha okungakumbi kunokwabelana ngesondo kunye nokubandakanya ukwamukelwa kuzo zonke iifom zayo. Inkqubo exhasa inyunithi yentsapho kwaye ivumele ukuba isebenze ekufundiseni isizukulwana esilandelayo iimpawu kunye nokuqonda okungundoqo apho iProgram yeZikolo eziKhuselekileyo ifuna ukususa kuyo.
NGAPHAMBI kokuba uvote, qiniseka ukuba uyazi ukuba ngamnye umviwa uyaxhaswa kunye neenkqubo abaya kuzixhasa. Thatha ivoti yakho ngokugqithiseleyo kwaye uthumele umyalezo kubaviwa ongeke ubekezele ukutshatyalaliswa kwamalungelo entsapho.
Urhulumente unokunikela kuphela oko sifuna, ukuba sibaxelele kuqala. Qonda kwaye ugubha amandla akho njengomzali wokukhokela umntwana wakho. Ukuba unobunzima bokuthetha nokuqonda indima yakho, funani kwaye nibhalise kwinkqubo yokuxhasa abazali ekulawulwa ngamacandelo asekuhlaleni. Akuyona inketho ekhuselekileyo yokuvumela abantwana bakho ukuba bathathe inxaxheba kwiprogram evale iingcango zawo kwaye ikhuthaza ukufihlakeleyo kunye "nokuzimela" ngokunyanzeliswa yinto ebizwa ngokuba yiZikolo ezikhuselekileyo.
Ungavumeli le nkqubo igule phantsi-I-TEAR IT DOWN!
Qhagamshelana nathi. I-imeyile: unobangela.victoria@gmail.com
Sincede sikhusele abantwana bethu.
Nikela kwi-CUSE. Ibhanki: I-NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206
Copyright © 2021 I-CAUSE (Umdibaniso wokuChasana neMfundo engakhuselekanga yezeSondo)